नेकपाको एकीकरण कार्यदलमा मन्त्रीले समय दिएनन , फुकेन प्रदेश कै गाँठो ! – www.agnijwala.com
नेकपाको एकीकरण कार्यदलमा मन्त्रीले समय दिएनन , फुकेन प्रदेश कै गाँठो !
एकीकरण लाई टुंगोमा पुर्याउन स्थायी कमिटी बैठकले शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको थियो ।सो कार्यदलमा चार मन्त्रीका रहेका छन । पुस मसान्तसम्म प्रदेश कमिटीको हेरफेर, जिल्ला कमिटीको एकीकरण, केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँड र जनवर्गीय संगठन सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव ल्याउने गरी गठन गरिएको थियो । तर केही मन्त्रीले कार्यदलमा समय दिन नसकेका कारण कार्यदलले कुनै पनि प्रस्तावलाई ठोस निस्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन ।
१२ पुसमा गठन भएको नौ सदसीय कार्यदलको बैठक पाँच पटक बस्न खोज्यो । तर दूई पटक मात्र पूर्ण सदस्य सहभागी भएको बैठक बस्न सकेको छ । केही दिनअघि ललितपुरको एक होटलमा दिनभर बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश सदस्यहरुको नामावली हेरफेरको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । तरपनि प्रस्तावले ठोस रुप लिन सकेन । दिनभर छलफल गर्दा पनि प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेर गर्नेमा सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
कार्यदलका सदस्य रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन् भने बर्षमान पुन उर्जामन्त्री हुन् । त्यसैगरी रघुवीर महासेठ भौतिक तथा यातायातमन्त्री छन् भने शंकर पोखरेल ५ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् ।
यी चार मन्त्रीका कारण नेकपा कार्यदलको बैठकले दुई सातामा बित्दा पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । प्रदेशको नामावली हेरफेरमै सहमति नभएपछि जिल्ला, र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रस्तावमा छलफल नै भएको छैन । तर केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा भने अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
कार्यदलले ठोस प्रस्ताव ल्याएपछि सचिवालय बैठकमा छलफल गरी स्थायी कमिटीबाट अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरिएको छ । तर कार्यदलले पाएका चार मुख्य कार्यभार नै अलमलमा परेको छ ।